Garoonka Muqdisho oo lagu qabtay raashin dhacay
Mjournal :-Taliyaha Hoggaanka ilaalinta Canshuuraha ee Boliiska Soomaaliya Gen C/laahi Xasan Bariise ayaa sheegay in diyaaraddii siday raashinka dhacay ee ay qabteen ciidamada ammaanku ay ku sii jeeday magaalada Garbahaarreey ee xarunta Gobolka Gedo. Generaal Bariise ayaa intaa...
Jen C/llaahi Gaafoow si ku-meel-gaar ah loogu magacaabay taliyaha hay’adda NISA
Mjournal :-Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xassan Sheekh Max’uud ayaa xil ka qaadis ku sameeyey Taliyihii Hay’adda Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka (NISA), S/Guuto Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare. Madaxweynaha ayaa xilka qaadista taliyaha u cuskadey qodobada 87-aad iyo...
Nin lagu tuhusan yahay Al-shabaab oo lagu xiray dalka Kenya
Mjournal :–Booliska Kenya ayaa sheegay inay xireen nin ay ku tuhmeen Alshabaabnimo isla markaana la sheegay inuu ku sii jeeday dhanka Soomaaliya. Warkaa oo un soo shaac baxay shalay galab gaabadkii ayaa tibaaxaya in Jimcihii aanu soo dhaafnay biliiska Kenya ay xireen ninkaa...
RW Sharm’arke oo cambaareeyay toogashadii dadka badan lagu laayay ee Mareykanka
Mjournal : –Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya aad uga xuntahay toogashadii dadka faraha badan ku dhinteen ee ka dhacday goob lagu caweeyo ee ku taal magaalada Orlando ee Gobolka Florida. Cumar Cabdirashiid...
Eritrea oo eedeyn u jeedisay Itoobiya
Mjournal :-Xukuumada Eritrea ayaa ku eedeysay Itoobiya inay weerar ku soo qaaday dhulkeeda, kadib dagaal xooggan oo shalay subaxdii ka dhacay xuduuda lagu muransan yahay ee labada dal wadaagaan. War uu soo saaray Wasiirka Warfaafinta Eritrea Yemane Ghebremeskel ayuu ku sheegay in...
UNHCR iyo madaxweynaha Kenya oo ka wada hadlay qaxootiga Soomaalida
Mjournal :-Dowladda Kenya ayaa ugu baaqday hay’adda Q.M u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR in ay taageerto go’aankeeda ku aadan dib u celinta qaxootiga Soomaaliyeed ee ku sugan xeryaha Dhadhaab. Afhayeenka Madaxtooyada ee dalka kenya Manoah Esipisu oo la hadlayay warbaahinta...
Ciidammo Itoobiyaan ah oo gaaray deegaanka Halgan ee gobolka Hiiraan
Mjournal :-Wararka naga soo gaaraya deegaanka Halgan ayaa sheegaya in ciidamo Itoobiyaan oo xoojin ah la geeyay deegaankaas, kuwaasoo ku biiraya ciidamadii horay u joogay deegaanka ee la dagaalamay Al-Shabaab. Sida ay sheegayaan wararka ciidamadan oo ku hubeysan gaadiidka...
Eritrea iyo Itoobiya oo mar kale ku dagaalamay xadka labada dal
Mjournal :-Maalintii shalay ayaa dagaal xoogan oo u dhaxeeya ciiidammada dowladdaha Itoobiya iyo kuwa Eritrea waxaa uu ka dhacay xuduuda labada dhinac ku muransan yihiin. Rasaas culus oo labada dhinac is weydaarsadeen ayaa laga maqlay aagga ay labada ciidan isku hor-fadhiyaan ee...
AMISOM oo laga dalbaday ilaaalinta shacabka inta ay socdaan howlgalada
Mjournal :–Saraakiisha Millateriga Ciidamada AMISOM – ayaa loogu baaqay inay qaadaan tallaabooyin lagu dhawrayo bulshada qaybaheeda kala duwan jilicsan sida Haweenka & Carruurta, xilliyada ay socdaan Hawl-gallada ay Soomaaliya ka wadaan. Ku-simaha Madaxa...
Madaxweynaha Angola oo warqadihii aqoonsiga ka guddoomay safiirka Soomaaliya
Mjournal :–Madaxweynaha Angola Jose Eduardo dos Santos ayaa si rasmi ah waxaa uu waraaqaha aqoonsiga uga guddoomay Danjiraha Soomaaliya ee dalkaas Jamaal Maxamed Barrow ahna Danjiraha Soomaaliya u jooga Koofur Afrika. Munaasabad kooban oo ka dhacday aqalka Madaxtooyada ayaa...
Dad lagu la’yahay weerarkii dalka Mareykanka
Mjournal :-Boolsika magaalada Orland ee dalka Mareykanka ayaa sheegaya in ku dhawaad 20 qof lagu dilay weerar ka dhacay baar habeenkii lagu caweeyo. Waxa ay xaqiijiyeen in ninkii geystay weerarkaasi oo hubeysan ay uu afduub u qabsaday dad, isaga oo sidoo kale rasaas ku furay...
Al-shabaab oo sheegatay in ay gacanta ku hayaan diyaarad nooca wax basaaso ah
Mjournal :-Xarrakada Al-shabaab ayaa sheegtay in diyaarad Drone ah oo ay ku xiran yihiin Kaamirooyin ay maanta ku soo dhacday deegaan ka tirsan degmada Wanlaweyn ee Gobolka Shabeellaha Hoose. War lagu qoray baraha Internet-ka ee taageera Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in diyaaradan...
The Latest: 50 killed in deadliest mass shooting in US
The Latest on the shooting at an Orlando nightclub (all times local): 10:50 a.m. The massacre at an Orlando nightclub that claimed 50 lives is the worst mass shooting in U.S. history. Police Chief John Mina confirmed at a news conference Sunday morning that 50 people were killed,...
A number of England fans were taken to hospital in France following a series of clashes between football supporters in Marseille. Violence has broken out between England fans, rival supporters and police for the last three days in the port city. There were also clashes in the...
Mas’uuliyiin ka kala tirsan Itoobiya iyo Soomaaliland oo ku wadda hadlay Hargeysa
Mjournal :-Waxaa magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Soomaaliland kulan ku yeeshay xubno ka socda xukuumada Soomaaliya iyo mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Soomaaliland. Wafdi uu hoggaaminayo Wasiiru-dawlaha arrimaha debedda ee Itoobiya Regasa Kefalewu oo gaaray magaalada...
Weerar ka dhacay meel lagu caweeyo oo ku taala dalka Mareykanka
Mjournal : -Ku dhowaad 20-ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku geeriyoodeen toogasho ka dhacday goob lagu caweeyo oo ku yaal magaalada Orlando Gobolka Florida ee dalka Mareykanka. Nin hubeysan ayaa galay goobta lagu caweeyo, xalay saqdii dhexe xilliga Mareykanka, waxaana uu rasaas ku...
Dagaal ka dhacay degmada Cadaado ee gobolka Galmudug
Mjournal :-Wararka xiligan naga soo gaaraya degmada Cadaado ee gobolka Galguduud, ayaa sheegaya in saddex ruux ay ku geeriyootay, shan kalena ku dhaawacmeen dagaal u dhaxeeyay labo ciidan. Dagaalka ayaa dhex maray Ciidanka Milateriga ee qeybta 21aad iyo Ciidamo taabacsan maamulka...
Dowladda F” dib u eegis ayaa lagu sameynayaa hishiiskii ka dhanka ahaa qaxootiga
Mjournal :–Iyadoo Kumannaan Qaxootiga Soomaaliyeed ah ee weli ku nool yihiin Xeryaha Dhadhaab-Kenya, ayaa waxayaabaha suuro-gelin kara inay dalkaas sii joogaan Waxaa ka mid ah in la cusboooneysiiyo heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee lagu kala saxiixday Magaalada Nairobi...
Maamulka gobolka Banaadir oo magacaabay guddi ka shaqeeya ammniga caasimada
Mjournal :-Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa magacaabay Guddi heer degmo ah, kuwaasoo lagula xisaabtamayo Amniga Caasimadda. Afhayeenka Gobolka Banaadir C/fataax Cumar Xalane ayaa sheegay in Guddiyadan ay isugu jiraan mid heer degmo iyo heer gobol,...
Axmed Madoobe” July waxaa bilaabanaya howlgal ka dhan ah Al-shabaab
Mjournal :-Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa sheegay in dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab uu bilaaban doono bisha soo socota ee July, isagoo xusay in ciidamada maamulkiisa iyo kuwa AMISOM ay diyaar garoobeen. Axmed Madoobe ayaa sheegay in la gaaray...